Waa maxay mowqifka beesha Hawiye ee doorashada beesha Isaaq. – Puntland News
Home 2017 November 15 Somali News Waa maxay mowqifka beesha Hawiye ee doorashada beesha Isaaq.
Waa maxay mowqifka beesha Hawiye ee doorashada beesha Isaaq.
November 15, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Xubnaha beesha Hawiye ee ku jira dawladda Soomaaliya ayaa u hambalyeesay kooxdii doonaysay in Somaliya inteeda kale ka go’aan, iyaga oo sidoo kale sheegay inay soo dhowaynayaan hogaamiyaha ku guulaysata Doorashada Soomaali lagu kala go’aynayo . Halka hal sadar ayna kaga xusin war murtiyoodkooda umaddii Soomaaliyeed ee gobolada Sanaag iyo Sool u banaan baxaday midnimada Soomaaliya diidayna inay Soomaali inteeda kale ka go’aan.
Dawaladaha federaalka Ciraaq iyo Spain oo arin tan oo kale qabstay dhowaan, ka dib markii Kurdiyiinta iyo Catalonia ay la yimaadeen arin la mid la mid ah tan beesha Isaaq wadaan, ayaa madaxda federaalku si cad uga hor yimaadeen iyaga oo ilaalinaya midnimada dalalkooda. Laakiinse kooxda cuqdadaysan ee Muqdisho isku urustay, iyaga waxa u muuqda Irisamaale oo dawlad noqday.
Ninka Soomaaliya ugu magcaaban wasiirka warfaafinta oo muuqalka hoose akhrinaya, waa ninkii madaxda ka ahaa Ururkii Hawiye Concern Group waqtigii Allah ha u naxariistee Cabdulaahi Yuusuf Soomaaliya madaxweynaha ka ahaa